Dalka Kenya ayaa waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore ka dhacayay qaraxyo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadoo dowladda Kenya ay mas'uuliyadda qaraxyadaas dusha ka saarto Xarakada Al-shabaab.
"Waxaan maqlay laba qarax oo ka dhacay goob ay dad badan ku sugnaayeen," ayuu yiri Ibaahim oo kas mid ah dadka daggan degmada, isagoo sheegay inuu arkay dhaawacyada shan qof oo ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa.
Madaxa caafimaadka gobolka waqooyi-bari, C/qaadir Sheekh ayaa isaguna sheegay mar uu saxaafadda la hadlayay in shanta qof ee ku dhaawacmay weerarada bam lagu daweynayo isbitaalka weyn ee degmada.
"Cid ku dhimatay qaraxyada ma jirto, keliya waxaan haynaa dhaawacyo, waxaana dhacay laba qarax," ayuu yiri C/qaadir Sheekh. Iyadoo wararka laga helayo halkaas ay sheegayaan in kooxihii weerarka geystay ay durbadiiba baxsadeen.
Isniintii toddobaadkan ayay ahayd markii saddex sarkaal oo ka tirsan booliiska dalka Kenya lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay deegaanka Libooyo oo ka mid ah deegaannada ku dhow soohdinta ay labada dal wadaagaan, waxaana weerarkaas ku dhaawacmay laba qof oo Soomaali ah.
Xarakada Al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore ku hanjabtay inay gudaha Kenya ka geysan doono qaraxyo, kuwaasoo ay uga jawaabayso ciidamada ay Kenya u soo dirtay gudaha Soomaaliya, kuwaasoo dagaal kula jira xoogaggeeda.